Ijoollen mgaalaa Austraaliyaa guddicha keessaa Sidiniin COVID 19tti duuluuf boqonnaa murteessaa irra waan geesseef jecha wixiata har’aa mana barnootaatti deebi’anii jiran.
Angawoonni akka jedhanitti jiraattonni kutaa New South Wales kan sidiniin magaalaa guddoo taateef, namoonni umuriin isaanii waggaa 16 ol ta’an dhibba irraa harki 80ni tallaalii waan fudhataniif jecha qalbii dhaan uggura irraa dandammataa jiru. Mana keessatti maaskii kaayyachuun hafee, manneen nyaataa, manneen dhugaatiif bakki spoortii itti hojjetan namoota talaallii guutummaan fudhatan simachuu jalqabaniiru.
Gama biraan, jiraattonni melborn Austraaliyaa jimaata dhuftu uggura kana irraa guutummaan ni walaboomu jedhemee kan eegamu yoo ta’u, kutaan Viktooriyaa immoo jiraattonni ishee dhibba irraa harka 70ni guutummaan talaallii fudhachuuf karoora jirutti dhiyaataa jirti.
Austraaliyaan uggura sochii akkaan cimaa ta’e kaa’uu dhaan faca’ina COVID-19 to’achuutti milkooftee jirti. Haa ta’u malee vaairesiin koronaa Delta jedhamu haaraan Sidnii keessatti baatii Waxabajjii keessa ka’e Austraaliyaa guutummaa keessaa angawoonni uggura sochii cimaa deebisanii magaalaalee irra akka kaa’an dirqisiise.
New Zealnd magaalaan Auckland keessaa uggurri sochii akkuma kaa’ametti jiraachuu muummichi ministeeraa biyyattii Jacinda Ardern beeksisaniiru. Akkuma Austraaliyaa, New Zealandis faca’ina vaayiresii koronaa kanneen to’atan biyyoota xiqqoo keessaa ti.